It is me. Ko Niknayman.: မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစု အဖွဲ့မှ နအဖ စစ်အုပ်စုထံ တောင်းဆိုချက် (၄) ရပ်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းများ စုပေါင်း၍ အစိုးရအနေဖြင့်သံဃာများကို ၀န်ချ တောင်းပန်ရန်ဆုံး ဖြတ်ချက်ချမှတ်လိုက်ပြီး မလိုက်နာပါကပတ္တနိကုတ္ဖုဏ သပိတ် မှောက်ကံဆောင်သွားမည်ဟုကျေညာချက် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
သံဃာအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှ သံဃာတော်များ နှစ်ရက်ကြာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့မှတောင်းဆိုချက်၎ချက်ပါ ကျေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ သံဃာ့သမဂ္ဂီအဖွဲ့ချုပ် မန္တလေးတာဝန်ခံ ဦးခေမိန္ဒက မိန့်ကြားသည်။
အချက်လေးချက်ကိုဦးပဉ္ဖင်းတို့တောင်းဆိုတယ်။ တောင်းဆိုတာတွေမရရင်နောက်ပိုင်းကျတော့ သပိတ်မှောက် ကံဆောင်ကြတော့မှာပဲလေ။
ယခုပြုလုပ်ခဲ့သောအစည်းအဝေးတွင် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ရဟန်းပျိုများအဖွဲ့ချုပ်၊ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့သမဂ္ဂီများ အဖွဲ့ချုပ်၊ ရဟန်းပျို သမဂ္ဂ(ရန်ကုန်)နှင့် အခြားသံဃာအဖွဲ့များ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
Posted by Ko Niknayman at 9:57 PM